Mini Sausage Kugadzira Line
Mini masoseji anoreva sausage diki-saizi, kazhinji mukati me5cm pakureba uye ingangoita 10g pakurema. Dzinogona kushandiswa semaseji ezvikafu zvekudya, sosi dzinopisa, nezvimwewo. Zvigadzirwa zvemasausini madiki zvakajairika soseji zvakajairika, kunyanya huku, nyama yenguruve, nyama yemombe, nezvimwewo zvinoda kukuya, kusanganisa, kuzadza, kubika, nezvimwe. Chigadzirwa chakapedzwa chinogona kudyiwa chaicho, kana kukangwa, chakasanganiswa nezvimwe zvinoshandiswa kugadzira zvinwiwa zvakasiyana, nezvimwe zvinonhuwira zvakasiyana, crispy uye zvinonaka.
Pelmeni Kugadzira Line
Pelmeni (Pelmeni / пельме́ни,) igomba remhando yeRussia-dumpling rine zita rinotorwa kubva pakutanga zvinyorwa zve пельнянь zvichireva "nzeve yechingwa". Pimani dumplings anowanzo gadzirwa neisina kuviriswa hupfu hutete hwakaputirwa munyama yepasi, hove kana kuzadza kwemuriwo. Kwayakabva kunogona kuteverwa kumashure kuSiberia, asi ikozvino chave chikafu chenyika yeRussia, uye chakaburitsa tsika nyowani kutenderera pasirese .Pimanni dumplings inowanzo bikwa mumvura kusvika yabikwa, ndokuzorwa ...
Yakamonyoroka Sausage Production Line
Sausage yekugadzira tambo seyedu huru chigadzirwa, mushure mekuenderera kuvandudzwa uye hunyanzvi, inogona kuiswa kune akasiyana zvigadzirwa zvinodiwa. Kubva padiki-padiki semi-otomatiki ekugadzirisa michina kusvika kune otomatiki ekugadzirisa ekugadzira mitsara.Iye zvakare yakakodzera kugadzirwa nekugadziriswa kweakasiyana mbishi zvigadzirwa, huku, nyama yemombe, uye mamwe masoseji.Tinogona kupa yakakwana seti yekugadzira mhinduro, kubva mbishi kugadziriswa kwezvinhu zvekubvira uye kuputa, kune yekupedzisira kurongedza In sa ...
Yakajeka Gummy Yekugadzira Line
Iyo gummy ine muto yakatangira kubva kuJapan, inozivikanwa nekuwedzera huwandu hwakawanda hwemuto wemichero panguva yesystem, uku uchidzora nekukiya mvura uye muto wegamu nekubika, wozoizadza mukochengen casing. Nenzira iyi, iyo yekutanga kuravira kweiyo yepamusoro-mwando zvemukati inogona kuchengetedzwa kune yakakura kwazvo mukana, uye musanganiswa wakakwana wemuchero muto uye nyoro zvihwitsi zvinogona kuchengetedzwa. Mushure mekuenderera kuvandudzwa uye nemutengi mhinduro, ...
Noodles, seimwe yezvakakurumbira chikafu mupasi, inogona kuwanikwa chero kupi. Kune mhando dzakawanda dzemaoodles, matsva matsva, semi-yakaoma maoodles, manzou akaomeswa nechando, zvakabikwa manoodles, akaomeswa manoodles uye zvichingodaro. Tine makore anopfuura makumi maviri eruzivo mune kugadzirwa kwemaodles michina. MuChina, isu tinopa zvishandiso kumakambani makuru ekugadzira manoodle. Mune dzimwe nyika nematunhu, isu tinopawo tekinoroji rutsigiro uye yakagadzirirwa masevhisi evatengi vakasiyana uye vawana ...
Yakatemwa Sausage Production Line
Iyo clipper muchina inogona kushandiswa kune akasiyana akateedzana ezvigadzirwa, sausage, ham, salami, polony, zvakare kune bota, chizi nevamwe. Nekuda kwekusiyana kwayo kwakawanda, nyore kuchengetedza, nyore, uye kuita, vanhu vanogara vachida zvigadzirwa zvenyama. Kazhinji, masoseji akachekwa anonyanya kugadzirwa epurasitiki macasing, ayo ane mweya wakanaka, nyore kuchengetedza, uye kuomarara kwakasimba. Icho chimiro chikuru cheiyo yakazara seti yemidziyo inogadzirwa yemhando yepamusoro 304 simbi isina simbi, ine yakakwira yekugadzirisa ac ...
Mushini wese wakagadzirwa nesimbi isina chinhu uye zvimwe zvekudya zvekudya, izvo zvinosangana nehutsanana zviyero uye HACCP zviyero, izvo zviri nyore kuchenesa; muchina wese wakagadzirwa nemidziyo yemagetsi yakachengeteka. Wide akasiyana mashandisiro, uye akasiyana siyana anoshanda mbishi zvinhu, uye zvakawanda zvigadzirwa. Uye zvakare, yakagadzirirwa muchina weesize uye muchina wekuchidzira kuti uve hamburger patty, huku chop, uye hove patty yekugadzira mutsara. Mukuita kwekugadzira nyama mbishi, ...
Yakakwenenzverwa Bun / Baozi Production Line
Iyo otomatiki inoteedzera ruoko-yakagadzirwa bun kugadzirwa mutsara inoteedzera yakagadzirwa nemaoko, inokungurutsa mukanyiwa kuita zvidimbu, haukuvadze huturu hwakasanganiswa hwehupfu, inoteedzera iro rakakangwa ruoko ruva, iro ruva chimiro nderechisikigo, rakanaka, uye rine rupo, chigadzirwa ine gluten yakawanda uye kuravira kwakanaka. Iyo inodzorwa nhanho-shoma yekumhanyisa mirau system, uye huremu hwechigadzirwa uye urefu hunogadziriswa. Mushini wese unogadzirwa nesimbi isina chinhu uye unodzorwa nekombuta yekubata. Ini ...
Meatballs yakajairika uye inopedzwa munenge nyika dzese dzepasiIyi tambo yekugadzira ndeye zvese-giredhi 304 simbi isina simbi ine centralized control system, inoenderana zvakasiyana mbishi zvigadzirwa, zvinosanganisira nyama yemombe, huku, nyama yenguruve, nezvimwewo, uye zvinogona zvakare ive yakakodzera yezvakakosha zvigadzirwa, senge nyama yenyama zvigadzirwa zvine miriwo uye zvimwe zvidimbu.Can kusangana zvakasiyana zvekugadzira zvinodiwa. Kunyangwe iri nyama nyowani kana nyama yakagwamba sechinhu chisina kugadzirwa, inoda kugayiwa ...